Irra Fardiin Siidaa Ijaaruu osoo hin taane Rakkoo Ardii Afriikaaf Furmaata Soquu dha – Adda Bilisummaa Oromoo
Irra Fardiin Siidaa Ijaaruu osoo hin taane Rakkoo Ardii Afriikaaf Furmaata Soquu dha.
Matootiin biyyoota Afriikaa dhaabbata Gamtaa Afriikaa jedhu jalatti gurmaa’an walakkaa jaarraa oliif wagga waggaa fi akka barbaachisaa tahetti wal gahan. Haa tahu malee Gamtaan Afriikaa kun hojii ulfaatoo fi fardii Ardii Afriikaa fi ummatoota Afriikaaf tahu hojjachuuf osoo hin taane irratti wal faarsuu fi wal deggeruuf kan wal gahan tahuu waggootni 50 ol dabarsan ragaa tahu. Kana irraa har’as biyyootni Afriikaa hedduu mootummaa deggersa ummata biyya bulchanii hin qabneen durfamu. Kana irraas ummatootni biyyoota Afriikaa hedduun mootummoota farra dimokraasii fi abbaa irree jalatti hiraarfamaa jiran.
Kan ajaa’ibu qaphxiileen fardii fi irratti mari’atamuu qaban akkanaa kaafamanii kan irratti hin mari’atamne tahuu dha.